EManhattan, ENew York Kwenziwa Into Entsha
EManhattan Kwenziwa Into Entsha
NgoNovemba 2011, iqela lamaNgqina kaYehova liqalise ukuzama inkqubo entsha yokufundisa abantu ngeBhayibhile besebenzisa iitafile ezintle ezihombisileyo kunye neenqwelo. Oku kwenzeka kwintshona yeManhattan, eyona ngingqi inkulu nephithizelayo eNew York.
Le ndawo bayahlule yaziinxalenye ezine. Nxalenye nganye ineendawo apho abantu abadlulayo banokubona itafile okanye inqwelo ezele ziincwadi ezithetha ngeBhayibhile ejongwe nguvulindlela wakuloo ndawo. Uninzi lwezi nqwelo okanye iitafile lufumaneka kwiirenki zokukhwela, apho kuphithizela khona amawaka-waka abantu suku ngalunye.
Kwezi ndawo, abantu bangaphenduleka kwimibuzo emininzi abanayo ngeBhayibhile. Abantu abangxamileyo bangazithathela iincwadi baze bazifundele xa benethuba.
Ezi ncwadi zifumaneka ngeelwimi ezininzi. Ukuba kukho ulwimi olungekhoyo, lungaodwa ize loo ncwadi ifumaneke emva kweentsuku ezimbalwa.
Abasemagunyeni kunye nabahlali baye bayithanda le nkqubo.
Elinye ipolisa lathi: “Benikade niphi? Ninento efunwayo ngabantu.”
Enye indoda yasuka yema ngxi xa ibona incwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? Yathi ibone abantu esitishini sikaloliwe befunda le ncwadi, yazibuza ukuba bayithatha phi. Ngoku iyazi.
Omnye umfana ebegqitha kwenye yezi tafile suku ngalunye kangangeeveki ezintandathu esiya emsebenzini. Ekugqibeleni, wema wathi, “Ndicela uncedo.” AmaNgqina ayekule tafile bamnceda. Amnika iBhayibhile aza ambonisa indlela yokuyifunda.
Abakhweli beemoto abadlula kwezi tafile nabo baye banomdla. Kwenye yeenyanga ezigqithileyo, le nkqubo yaseManhattan iye yanika abantu ithuba lokufumana amaphephancwadi ali-3 797 neencwadi ezingama-7 986.